Umaki: rel = nofollow | Martech Zone
Umaki: rel = nofollow
Angiyena umnikeli omkhulu ku-Wikipedia. Kodwa-ke, esikhathini esedlule nginikele ngemali ethile esisekelweni futhi nganikela ngokuqukethwe kusayithi labo. Ngiyayithanda iWikipedia… Ngiyisebenzisa ngaso sonke isikhathi futhi ngiyikhomba njalo kubhulogi yami. I-Wikipedia nayo yangisiza - yakha amanye ama-hits wesiza sami KANYE ne-Wikipedia yathuthukisa izinga lami lesiza jikelele ngezixhumanisi ezibuyela kimi. Ngokunikwa lo mbono, ngabe lokhu bekunganikiwe